Musharraxa Cabdikariim Guuleed oo rajo wanaagsan ka muujiyay shirka arrimaha doorashooyinka ee 20-ka bisha – Kalfadhi
Musharraxa Cabdikariim Guuleed oo rajo wanaagsan ka muujiyay shirka arrimaha doorashooyinka ee 20-ka bisha
May 19, 2021 Hassan Istiila
Musharraxa madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed, ayaa xusay in rajo wanaagsan oo guleysata uu ka filayo shirka loo madlan yahay 20-ka bisha ee looga hadli doono arrimaha doorashooyinka.
“Shirka loo madlan yahay 20ka bisha oo ah shir ay dhamaan bulshada Soomaaliyeed iyo beesha Caalamkuba ka dhursugayaan inuu soo afmeeri doonno khilaafaadkii iyo kala aragti duwanaashahii hareeyay qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah, shirkaas ayaan waxaan u rajeynayaa inuu guuleysto, ayna ka soo baxaan go,aano horseedi kara in dalku ay ka dhacdo doorashadii mudada dheer la sugayey.”
“Waxaan rajeynayaa in dadaalada Raisuwasare Rooble iyo xukuumaddiisa ee ku aadan najaxinta shirkaas iyo qabashada doorasho hufan ay mirro dhalaan. Anigoo dhicyadeena oo idilna ku boorinaya in la muujiyo dabacsanaan iyo tanaasul suurto galin kara qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah laguna kalsoonaan karo hufnaanteeda”, ayuu kusoo gunaanuday hadalkiisa.
Maalin ka hor Midowga Musharaxiinta Mucaaradka ah ee Somaaliya ayaa walaac ka muujinaya hannaanka ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu wado howlaha doorashada iyo shirka loo balansanyahay ee looga hadlayo arrimaha dooorashooyinka.
“Hal xaraf oo aad ku qorto baraha bulshada, haddii qof uu u dhinto qeyb ayaad ka tahay mas’uuliyadeeda”
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland oo ku geeriyooday Muqdisho